१० वेबसाइटहरू जहाँ तपाईं आफ्नो पोर्टफोलियो छिटो, सजिलो र निःशुल्क बनाउन सक्नुहुन्छ क्रिएटिव अनलाइन
मानुएल रामीरेज | | वेब डिजाइन, पुनरावृत्त, धेरै
कुनै डिजाइनरको लागि यो हो धेरै महत्वपूर्ण एक छ अनलाइन पोर्टफोलियो तिनीहरूको रोजगार संग जहाँ कुनै सम्भावना छ ग्राहक हाम्रो काम हेर्न र हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई काममा लिनुहोस् र उसको लागि काम गर्नुहोस्।
आदर्श छ हाम्रो नामको वेब डोमेन वा हाम्रो एजेन्सी वा डिजाइन अफिसको नाम र त्यहाँ हाम्रो पोर्टफोलियो होस्ट, तर तपाईंसँग आफ्नो पोर्टफोलियो डिजाइन गर्न समय, पैसा वा आवश्यक ज्ञान छैन भने, दर्जनौं वेबसाइटहरू छन् जहाँ यो काम हाम्रो लागि सजिलो छ।
1 के यो एक पोर्टफोलियो हुन आवश्यक छ?
2 १० वेबसाइटहरू नि: शुल्क तपाईंको पोर्टफोलियो सिर्जना गर्न
के यो एक पोर्टफोलियो हुन आवश्यक छ?
पोर्टफोलियो प्राप्त गर्न आउँदा कुराहरु धेरै परिवर्तन भएका छन् जहाँ हामी कला वा शिल्पहरू देखाउन सक्छौं जुन हामी गर्छौं। हामी यो भन्छौं किनकि सबै भन्दा राम्रो जडान गति र उपकरणहरूको विस्तृत विविधता को लागी धन्यवाद, तपाईंको पोर्टफोलियो छिटो, सजिलो र नि: शुल्क बनाउन अब एकदमै साधारण तरीकाले सम्भव छ।
हामी जडान गति बारे कुरा गर्छौं किनकि यसले हामीलाई उत्तम गुणस्तर, रिजोलुसन र भिडियोहरू अपलोड गर्न को सामग्री उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। तर यसको सामना गरौं, र हामी तपाईंलाई १० स्थानहरू देखाउँदैछौं जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईंको पोर्टफोलियो बनाउनुहोस् र त्यसपछि ग्राहकहरू देखाउनुहोस् र कम्पनीहरु को लिंक मा एक क्लिक को सहजता बाट।
१० वेबसाइटहरू नि: शुल्क तपाईंको पोर्टफोलियो सिर्जना गर्न
हामीले बेहनसेको साथ सुरु गर्यौं किनकि डिजाइन, चित्र, चित्रण को कलाकारहरु को लागी र अधिक, यो महत्त्वपूर्ण स्थान हो जहाँ तपाईं हो वा हो। यो एडोबको छाता अन्तर्गत छ, त्यसैले यदि तपाईंसँग क्रिएटिभ क्लाउड खाता छ भने, तपाईं फोटोशपमा सिधा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नयाँ सिर्जना वा प्रोजेक्ट ब्यानसेमा गर्न ताकि तपाईंको अनुयायीहरूले पनि कार्य वा श्रृंखलामा कार्यप्रवाह अनुसरण गर्न सक्दछन्।
समय चाहिन्छ ताकि तपाईका अनुयायीहरू छन्, तर अन्य सामाजिक नेटवर्कहरूमा जस्तै, मनपराउने, अनुसरण गर्ने र हामीलाई अनुसरण गर्नेहरूलाई खोज्ने जस्ता, हामी छोटो समयमा कलाकारहरूको सानो समुदायमा भाग लिन सक्षम हुनेछौं। तपाईंसँग यो कुनै एडोब खातासँग नि: शुल्क छ, त्यसैले यो सजिलो हुन सक्दैन। ईन्टरफेस एकदम उत्तम र पोर्टफोलियो छोड्न एकदम सहज छ।
अन्य वेबमा कलाकारहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो स्थान र यहाँ, साथ साथै बेभान्समा, हामी पेशेवरहरू साथसाथै एमेच्यर्सहरूसँग ड्राइंग, चित्रण वा विज्ञापनमा समेत सुरू गर्ने साइट साझेदारी गर्न सक्दछौं।
DeviantArt हामीलाई अनुमति दिन्छ एक पूर्ण स्वतन्त्र पोर्टफोलियो छ र यो सयौं हजार प्रयोगकर्ताहरूले देख्न सक्छन् जुन यो नेटवर्कसँग छ। यो ती मध्ये एक हो जुन अघिल्लो भन्दा बढि प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्या रहेको छ। यसको ढाँचा पोर्टफोलियोमा अलि कम कलात्मक हो, तर यो स्थान हो यदि तपाईं यस बारेमा गम्भीर हुनुहुन्छ भने। यदि तपाइँ अ English्ग्रेजी वा अर्को भाषा चलाउनुहुन्छ भने सबै उत्तम हुन्छ।
फ्लिकर सँधै फोटोग्राफीमा जोडिएको थियो, त्यसैले हामी यो तपाईंहरु को लागी छोड्दछौं जो आफैलाई यो शाखाहरुमा समर्पण गर्छन्। यसको सब भन्दा राम्रो क्षमता मध्ये एक तस्बिरको ठूलो संख्या हो जुन तपाईंले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र ESIF जानकारी जुन प्रत्येक फोटोमा देखा पर्दछ। त्यो हो, तीनीहरूले तपाईले प्रयोग गर्नुभएको आईएसओ, एक्सपोजर स्तर र फोटोग्राफको लागि ती सबै महत्त्वपूर्ण डेटा जान्न सक्दछन्।
यद्यपि यो एक हो वेबसाइट फोटोग्राफी को लागी समर्पिततपाईंको फोटोहरू कलात्मक वा चित्रको रूपमा ट्याग गर्न सकिन्छ, ताकि तपाईं ग्राहकहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तर मैले भने, यो एक पोर्टफोलियो को रूप मा एक महान साइट हो।
तपाईको पोर्टफोलियो देखाउनको लागि अर्को उत्तम ठाउँहरू। यद्यपि त्यहाँ धेरै प्रकारका कलात्मक कोटिहरू छन्, यो डिजिटल स्तरमा छ जहाँ ड्रिब्लेले उच्चारण बनाउँदछ। केवल समस्या वा विकलांगता भनेको यो छ कि तपाईंको कला अपलोड गर्न तपाईंको खाली ठाउँ छ तपाईंलाई एउटा आमन्त्रित चाहिन्छ। पहुँचका लागि अरू कुनै तरीका छैन जबसम्म हामी ट्विटर खाताहरू अनुसरण गर्दैनौं र निमन्त्रणामा ध्यान दिदैनौं।
यस तरिकाले उनीहरूले ए समुदायले निम्ताहरू साझा गर्दैछ र यो यति टाढा आउने उहाँको तरिका हो। डिजिटल विज्ञापनका साथै डिजाइन वा चित्रणका लागि एक उत्तम कलाकार समुदायहरू। यसलाई नहेर्नुहोस् र आमन्त्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईका साथीहरूको सर्कललाई सोध्नुहोस् कि यदि उनीहरूलाई केहि थाहा छ भने।
यो समाधान उत्तम मध्ये एक होइन, तर यदि हामी नि: शुल्क खाताबाट एक अनलाईन साइट चाहन्छौं भने हामी यो पाउन सक्दछौं। यद्यपि हामी देख्न सक्दैनौं जबसम्म हामी बाकस भित्र जाने छैनौं। अर्को शब्दमा, हामी हाम्रो नि: शुल्क पोर्टफोलियो सेट अप गर्न सक्दछौं र यदि हामी हेर्छौं कि हामी प्लेटफर्म कस्तो देखिन्छौं भने हामी कार्बनमेडसँगै आउने तीनवटा योजनाहरू पहुँच गर्न सक्दछौं।
त्यहाँ छन् Projects परियोजनाहरु को लागी month एक महिना, १२ को लागी projects० प्रोजेक्टहरू, र अनन्त प्रोजेक्टहरू हुन पहिले नै एक महिनामा १ dollars डलर तिनीहरूले परियोजनाहरू अपलोड कलामा दर्शाउँछन्। यसको एक लाभ यो हो कि यसले एक धेरै रमाइलो पोर्टफोलियो अनुभव प्रदान गर्दछ जुन हामी हाम्रो टाउको खान छैन।
थीमफोरस्ट एक हो विभिन्न CMS का लागि हजारौं थिमहरूको साथ पोर्टल। ती मध्ये वर्डप्रेस र यसले हामीलाई पेशेवर र कलाकारहरूको लागि समर्पित विषयवस्तुहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। त्यो हो, यो एक उपयुक्त खोजीको लागि हो, यसको लागि न्यूनतम २०--20० यूरो तिर्नुहोस् र हामीसँग वर्डप्रेसमा स्थापना हुन एक थिम तयार हुनेछ।
यी शीर्षकहरू तिनीहरू प्राय: ट्यूटोरियलको साथ आउँदछन् हाम्रो पोर्टफोलियोको साथ वेब तयार छोड्न र हामी बाँकी केही चीजहरू कन्फिगर गर्न छोड्न सक्छौं। मैले पहिले भनेको के हो, तपाईले अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि अलि धेरै पेसागत वेबसाइट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नै यूआरएल, काम ईमेल र अधिक। यसले सामान्यतया यस मामलामा अधिक व्यावसायिकता दिन्छ र कलाकारलाई उसको युआरएल र ईमेलसँग चिन्नेले हामीलाई आउने सम्भावित सम्झौताको लागि अझ बढी पदार्थ दिन्छ।
यो समाधान यो धेरै चाखलाग्दो छ किनकि यो स्वतन्त्र छ। यो छवि ग्यालरीहरू जोड्नको विकल्पको साथ आउँदछ, एक ब्लग र एक डोमेन जुन हामीले पहिले होस्टिंगबाट भाडामा लिएका छौं। तिनीहरू सस्ता छन्, त्यसैले उनीहरूले हामीलाई WordPress स्थापना गर्न र तपाईंको ईमेलहरू र अरूहरूसँग युआरएल लिनबाट अनुमति दिन्छ।
यस प्लेटफर्मले आरामको ध्यान राख्दछ, जुन यसको वेब सम्पादकबाट माथिको दुई समाधानहरू भन्दा कम कामको साथ तपाईको व्यवसायिक पोर्टफोलियो सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं वास्तवमै राम्रोसँग बनाइएको वेबसाइटहरूको उदाहरणहरू देख्न सक्नुहुनेछ। र हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईलाई डोमेनको साथ ईमेल गर्नुहोस् अर्को स्तरमा लैजानको लागि। एउटा रमाईलो साइट जसमा हामी कुनै पनि भन्न सक्नुहुन्न यदि हामी निःशुल्क पोर्टफोलियो खोज्दै छौं भने। पनि तपाईंको युआरएलको साथ तपाईं हामीलाई समस्याबाट मुक्त हुन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र एक यूरो खर्च बिना हामीलाई अनलाइन देखाउनुहोस्।
अन्य प्लेटफर्म कलाकार र रचनात्मकलाई समर्पित र यसले हामीलाई हाम्रो पोर्टफोलियो सजिलैसँग र नि: शुल्क राख्न अनुमति दिन्छ। सबै भन्दा राम्रो, यो हाम्रो पोर्टफोलियो को लागी आदर्श हुन सक्छ कि धेरै योजनाहरु छ। फ्रिले यसको आफ्नै डोमेन समावेश गर्दछ र हामी यसलाई अब परीक्षण गर्न सक्छौं।
यदि हामी पहिले नै प्रति महिना9यूरो जान चाहान्छौं भने, हामीसँग पहिलो वर्ष र विज्ञापन बिना नै एउटा निःशुल्क डोमेन हुनेछ। अर्को शब्दहरुमा, तपाईसंग पोर्टफोलियो सित्तैमा हुनेछ, तर याद गर्नुहोस् कि तपाइँ विज्ञापन देख्नुहुनेछ। र यो यदि त्यो क्लाइन्टको अनुभवलाई क्लाउड गर्न सक्छ जसले तपाईंलाई आफ्नो कलाको आनन्द लिनको लागि हेर्न जानेछ। विज्ञापन जहिले पछाडि जान्छ।
हामीले Etsy लाई एक कारणको लागि सुरक्षित गरेका छौं, किनभने यो वस्तु बेच्नेहरूको लागि पोर्टफोलियोको रूपमा उत्तम साइट हो, शिल्प वा तपाइँको कला को प्रिन्ट। तपाईंको नि: शुल्क खाताले हामीलाई बेच्नु पर्ने कला अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ। अर्को शब्दमा, हामीले हाम्रो चीजहरूको मूल्य राख्नुपर्दछ। यसलाई पछाडि फर्काउन सकिन्छ, तर यदि तपाइँ तपाइँको डिजाइनको साथ अद्वितीय टोपी बनाउन चाहानुहुन्छ, Etsy भन्दा राम्रो ठाउँ छैन तपाईको कला प्रदर्शन गर्न र यसैले यसलाई बेच्न।
यदि तपाईं अ handle्ग्रेजी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भने तपाईं त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ यस ग्रहको प्रत्येक कुनामा जहाँ इन्टरनेट छ। र यदि तपाईं अमूर्त चित्रहरू बनाउँनुहुन्छ भने, तपाईं धेरै ग्राहकहरू पुग्न सक्नुहुनेछ जो उनीहरूको घरको लागि विशेष डिजाइनको साथ बिभिन्न चित्रहरूको खोजी गरिरहेका छन्। त्यो आफै पनि हुन सक्छ, त्यसैले तपाईं Etsy मा ​​आफ्नो कला राख्न को लागी पहिले नै अवसर गुमाउनुभएको छ, यसलाई ट्याग गर्नुहोस् र धैर्यताको साथ अरूलाई तपाईंको कलाको बारेमा कुरा गर्न जान्नुहोस्।
इन्स्टाग्राम एक सामाजिक नेटवर्क हो, हो। तर हामी यसलाई पोर्टफोलियोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं र यसरी सयौं लाखौं मानिस पुग्न। वास्तवमा, इन्स्टाग्राम हजारौं कलाकारहरूले प्रयोग गरेको मेगा हो। तिनीहरूले तिनीहरूको जानकारी राख्दछन्, उनीहरूको लोगोको फोटो राख्दछन् र त्यसपछि प्रत्येक पोष्ट तिनीहरूको प्रत्येक चित्रण, रेखाचित्र देखाउनको लागि बनाईन्छ। अहिले पनि यसलाई बेच्न एक अनलाइन स्टोरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अधिक inri को लागी, तपाइँ विकास र रचनात्मकता देखाउन एक फोटो क्यारोसेल राख्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, यो अर्को ठूलो अवसर हो जुन तपाईंको पोर्टफोलियो राख्छ र धेरैमा पुग्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » १० वेबसाइटहरू जहाँ तपाईं आफ्नो पोर्टफोलियो छिटो, सजिलो र निःशुल्क बनाउन सक्नुहुन्छ
ओलिभिया आर। आरडुआ भन्यो
नमस्ते, तपाइँलाई थाहा छ वा तपाइँसँग WordPress को लागी एक ट्यूटोरियल छ? उनीहरू भन्छन यो एकदम राम्रो, सजिलो र सस्तो छ, तर किनकि न त php न css मेरो कुरा हो, म यसलाई धेरै गाह्रो बनाउँदैछु: / बधाई छ, महान ब्लग।
ओलिभिया आर Ordña लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, तपाईलाई कस्तो छ?, पोर्टफोलियो हातले बनाएको रेखाचित्र प्रकाशित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ वा छैन?
एरिसिलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार तपाईले कसरी खोजिरहनु भएको छ वा पोर्टफोलियो बनाउनु नै धेरै सजिलो छ
नमस्ते, तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ? जे भए पनि पोर्टफोलियो बनाउन कत्तिको सजिलो छ?
तपाईको आर्थिक वेबसाइट भन्यो
योगदानको लागि धेरै धेरै धन्यबाद! मैले पहिले नै यो सिफारिशहरूमा मेरो पोर्टफोलियो समावेश गरेको छु जुन तपाईं हामीलाई बनाउनुहुन्छ। म यी साइटहरूको अनुसन्धान गर्न बिताएको समयको म साँच्चिकै कदर गर्दछु र अधिक पोष्टहरूका लागि खोजीमा हुनेछु। ब्लागमा बधाई छ, यो महान छ! मेक्सिकोबाट अभिवादन
तपाईंको आर्थिक वेबसाइटमा जवाफ दिनुहोस्
फिल्म लोगो डिजाइन को 50० उत्कृष्ट उदाहरण